Cudurada ku dhaca guska: astaamaha, astaamaha iyo dabeecadaha caafimaadka leh | Ragga Stylish
Caafimaadka xubinta taranka xubinta taranka ragga waa mid muhiim u ah xaalada ninka. Waxay ka gudubtaa awoodda yeelashada iyo hagaajinta kacsiga, biyo baxa iyo taranka. Way badan yihiin cudurada guska in ay tahay inaad ogaato sida loo daaweeyo waqtiga si looga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka. Dhibaatooyinkani waxay calaamad u noqon karaan xaalad caafimaad oo salka ku haysa. Waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo fara badan oo saameeya guska oo saameyn ku yeelan kara qeybaha kale ee nolosha.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin cudurada ugu waaweyn ee xubinta taranka, sida ay tahay inaad u aqoonsato iyo astaamaha lagu garto.
1 Cudurada ugu waaweyn ee guska
2 Waxyaabaha saameeya cudurada xubinta taranka
3 Goorta la arko dhakhtarka
4 Caadooyin caafimaad qaba
Cudurada ugu waaweyn ee guska
Dhibaatooyinka guska waxay astaan ​​u noqon karaan xaalad caafimaad oo salka ku haysa. Dhibaatooyinka caafimaad ee saameeya guska ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara dhinacyada kale ee nolosha, taasoo sababi karta isku buuq, dhibaatooyinka xiriirka ama kalsooni darro. Baro astaamaha iyo astaamaha dhibaatooyinka xubinta taranka iyo sida loo ilaaliyo caafimaadka xubinta taranka.
Dhibaatooyinka la xiriira shaqada galmada, dhaqdhaqaaqa galmada, iyo caafimaadka qalinka waxaa ka mid ah:
Cillada Naafada: waa awood la'aanta in la yeesho oo la ilaaliyo shirkad kacsi oo ku filan inuu galmo sameeyo.
Dhibaatooyinka biyo baxa: dhammaan kuwa la xiriira waxay ku jiraan dhibaatooyinkaas. Xaaladdan oo kale waxaan ku aragnaa karti-darrada in la biyo-baxo, daahid ama biyo-bax deg-deg ah, xanuun, biyo-baxa oo yaraada ama biya-baxa oo dib u dhaca.
Anorgasmia: waa awood la'aanta in la gaaro orgaanku inkasta oo kicinta ku filan.
Hoos u dhaca libido: Waa hoos u dhaca rabitaanka galmada.
Cudurada galmada lagu kala qaado: Waxay ka kooban yihiin dhammaan burooyinka xubnaha taranka ee sababi kara kaadi xanuun, dheecaan ka soo baxa guska, nabarro, nabarro iwm.
Cudurka Peyronie, xaalad dabadheeraad ah oo ku lug leh samayska unugyada nabarrada aan caadiga ahayn ee ku dhaca guska dhexdiisa, oo badanaa keena foorarsi ama kacsi xanuun badan.
Jabka xubinta taranka Waa burburka unugyada buurbuur ee sababa inta lagu guda jiro soo qaadista guska oo qaabeysan oo u eg. Guud ahaan waxaa sababa guska kacsan oo garaaca miskaha haweeneyda inta lagu guda jiro galmada.
Priapism, kacsi joogto ah oo badanaa xanuun badan oo aan ku kicin kicinta galmada ama kacsiga.
Phimosis, xaalad ah in buuryada buuryaqabka ee buuryaqabka aan laga soo celin karin madaxa guska, taasoo keenta kaadi xanuun iyo kacsi.
Paraphimosis, xaalad ah in maqaarka buuryadu uusan ku noqon karin booskiisii ​​caadiga ahaa ka dib markii dib loo jiido, taasoo keenta barar xanuun leh oo guska ah iyo socodka dhiigga oo xumaada.
Kansarka: Waxay ku bilaaban kartaa sidii finanka maqaarka maqaarka. Markuu cudurku horumaro, waxay isu badalaan koriin u eg wart oo soo saaraya malaxda biyaha.
Waxyaabaha saameeya cudurada xubinta taranka
Saamaynta muuqaalka cudurada kala duwan ee guska. Aynu aragno waxaay yihiin sababahan halista ah, qaar waa wax laga badali karaa qaarna ma ahan.
Cudurka wadnaha, sonkorowga, iyo xaaladaha la xiriira: Wadne xanuun, sonkorow, dhiig kar, kolestarool badan, iyo buurnida ayaa kordhin kara halista kacsiga.
Daawooyinka: Cilad-darida erectile waa waxyeelo suurtagal ah ee daawooyin badan oo caadi ah, oo ay ku jiraan daawooyinka loo isticmaalo daaweynta cadaadiska dhiigga, antidepressants, daawooyinka hurdo qorista, daawooyinka loo isticmaalo daaweynta boogaha, iyo daawooyinka loo isticmaalo daaweynta kansarka qanjirka 'prostate'.
Daaweynta kansarka qanjirka 'prostate': Ka saarida qalliinka ee qanjirka 'prostatectomy' iyo unugyada ku hareeraysan sida daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' waxay sababi kartaa kaadi-ceshan la'aanta kaadida iyo cillad aan caadi ahayn.
Sigaar cabidda: Khataraha caafimaad ee kale, sigaar cabistu waxay kordhisaa fursadahaaga inaad kacsato.
Cabitaanka khamriga xad dhaafka ah: Cabbitaanka badan wuxuu gacan ka geysan karaa libido yarida, cillad kacsi, iyo go'aano liita oo la xiriira dabeecadaha galmada.
Heerarka hoormoonka: Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu yar ee wax laga beddeli karo, maaddaama ay ku xiran tahay hiddo-wadahaaga. Gaar ahaan testosterone yaraanta waxay la xiriirtaa cillad kacsi.
Sababaha cilmi-nafsi: Niyad jab, cadaadis sare, ama xanuuno kale oo maskaxda ah, iyo sidoo kale daawooyin lagu daaweeyo cilladahaas, waxay kordhin karaan halista kacsiga. Taa baddalkeeda, cillad aan caadi ahayn oo kacsani waxay u horseedi kartaa walaac, niyad jab, isku kalsooni yaraan, ama culeys la xiriira habdhaqanka galmada.
Cilladaha neerfaha: Istaroogyada, dhaawacyada dhabarka iyo laf-dhabarka, sclerosis badan, iyo waallida ayaa saameyn ku yeelan kara wareejinta dareemayaasha maskaxda ee maskaxda ee guska, taasoo horseedi karta cillad aan caadi ahayn.
Da ': Waa wax iska caadi ah in marka aan gabowno ay hoos u dhacdo heerarka testosterone oo ay la xiriirto halista sii kordheysa ee kacsiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay kordhisaa suurtagalnimada hoos u dhaca xoogga orgasmska, xoogga biyo baxa iyo dareen yar oo guska ah inuu taabto.
Galmada aan aaminka ahayn: Iyagu waa kuwa dhaca iyada oo aan la ilaalin iyo lamaanayaal badan. Sidoo kale dabeecadaha galmada qaarkood ee kordhiya halista qaadista cudurada galmada lagu kala qaado.
Daloolin: Daloolinta xubinta taranka waxay sababi kartaa infekshinka maqaarka waxayna carqaladeysaa socodka kaadida. Waxay kuxirantahay meesha daloolinta la dhigo, waxay sidoo kale dhaawici kartaa awoodaada inaad ku gaarto kacsi ama kacsi.
Goorta la arko dhakhtarka
Markaan dhibaato aragno, maahan inaan had iyo jeer u tagno dhakhtarka baqdin leh. Noocyada noocan ah, dadku aad bay uga baqaan cudurada noocaas ah. Waxaan si fudud ugu tagnaa dhakhtarkayaga waqtiyada soo socda:
Waxaan fiirineynaa isbeddelada qaabka shahwada
Isbeddelada kadiska ah ee rabitaanka galmada
Dhiigbax inta lagu jiro kaadi ama biyo bax
Haddii aan qabno wax burooyin ah, nabarro ama kuus kuuskuus ah xubinta taranka.
Haddii aan leenahay qallooc aad u muuqda oo keena xanuun ama farageliya howlaha galmada
Gubashada dareenka kaadida
Ka soo bixida xubinta taranka
Xanuun daran kadib dhaawac soo gaadhay xubinta taranka
Caadooyin caafimaad qaba
Kahor intaadan dhaqtarka aadin wax cudur ah, waxaa fiican inaad kahortagto. Waayo, waa inaad barataa caadooyin caafimaad qaba. Aan aragno waxa ka mid ah waxqabadyada aan ku soo bandhigi karno maalinteenna maalinba maalinta ka dambeysa si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba:
Samee galmo aamin ah
Iska tallaal fayraska papillomavirus ee aadanaha
Samee jimicsi maalinle ah
Hayso miisaanka jirka oo wanaagsan iyo cunno wanaagsan
U fiirso caafimaadkaaga maskaxda
Jooji cabitaanka aan xadidneyn ee khamriga aad cabto.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto cudurada ku dhaca xubinta taranka raga iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Cudurada galmada
Tilmaamaha ugu fiican ee ragga miskaha ballaaran leh